Ao amin’ny kilasy famaranana sisa no fara vitan’ireo ray aman-dreny, indrindra moa raha mikasa hampiana-janaka eny amin’ny oniversite tsy miankina. Manoloana io tranga io dia saika mirenireny tsy misy hatao avokoa ny ankamaroan’ireo tanora Malagasy nefa manana baka. Ny famoronana asa ho azy ireny ihany anefa no hahafahana miady amin’ny fahantrana ho an’ny HAFARI Malagasy ka nosokafan-dRafanomezantsoa Jean Nirina ny fampianarana informatika maimaimpoana. Mpianatra miisa 230 no navoakany tamim-pomba ofisialy omaly teny Anosizato ka ny 37 tamin’ireo no afa-panadinana soa aman-tsara raha mbola afaka manohy kosa ny ambiny hahazoany ilay tena mari-pahaizana takian’ny asa ankehitriny. Nomarihin-dRafanomezantsoa Jean Nirina moa fa politikan’ny olom-pirenena no tanterahiny raha manao izao asa fanasoavana ny mpiara-belona izao fa tsy politikan’ny mpanao politika izay variana mitady seza fotsiny.